Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
Odsonne Edouard बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटल्ड बायोग्राफी तथ्यांक LifeBogger द्वारा
अन्तिम अपडेट गरिएको अगस्ट 15, 2019
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वोत्तम उपनाम संग ज्ञात "श्री लगातार“। हाम्रो Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या you्क ले तपाइँको बचपनको समयदेखि मिति सम्मका उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता तपाइँमा ल्याउँदछ।
Kieran Tierney बचपन कहानी - विश्लेषण। क्रेडिट TeamTalk र सेल्टिकुक्विक्युज
विश्लेषणमा उसको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा / क्यारियर निर्माण, प्रारम्भिक क्यारियर जीवन, प्रख्यात कथाको मार्ग, प्रख्यात कथामा वृद्धि, सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन र जीवनशैली इत्यादि समावेश छ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक हो सर्वोच्च प्रतिभाशाली बायाँ-पछाडि जसले आर्सेनल र अन्य शीर्ष प्रिमियर लिग क्लबहरू बनायो उनको हस्ताक्षरको लागि घुँडा टेकेर।। यद्यपि केवल केयरन टियरनीको जीवनी मात्र केहि थोरैले विचार गर्छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
किरन टियरनी जून5को 1997th दिनमा उनको आमा, गेल टियरनी र बुबा माइकल टियरनीको साथ आयरल्याण्ड सागरमा जन्मेका थिए।
Kieran Tierney आफ्नो परिवारको मूल र जरा छ नहीं इ England्ल्यान्ड, आयरल्यान्ड वा मुख्य स्कटल्यान्डबाट, तर आइल अफ म्यानबाट, एउटा टापु कडा समुद्रको किनारमा टुक्रिएको छ, मध्ययुगीन महलहरू तल चित्रित।
Kieran Tierney- प्रारम्भिक जीवन र परिवार पृष्ठभूमि। Digimap लाई क्रेडिट
अझै उसको परिवारको उत्पत्ति र इतिहासमा, यो सम्भव छ कि किरन टियरनीका पुर्खाहरू वाइकिंग राइडर्सको हातमा पर्नेहरू मध्येका थिए। यी Norsemen थिए जसले 8th देखि लेट 11th शताब्दी सम्म बेलायतमा छापा मारे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… किरन टियरनीको डग्लासको जन्मभूमि इतिहासमा रेकर्ड गरिएको ग्रेट ब्रिटेनको पहिलो स्थानको रूपमा रेकर्ड गरिएको छ वाइकिंगहरू AD 793 वरिपरि।
स्कटिश परिवारको जरा सहित अंग्रेजी फुटबलर दुई बच्चाहरू मध्ये एक उनको प्यारा आमा, गेल र बुबा माइकल (तल चित्रण) मा दुईको रूपमा जन्मेका थिए जो लेख्ने समयको रूपमा आफ्नो 50 मा हुन्छन्।
Kieran Tierney अभिभावक
कीरन आफ्नो जेठी बहिनीसँग स्कटल्याण्डको राजधानी एडिनबर्गको उत्तरमा अवस्थित एक आवासीय आवास सम्पत्ति मुइरहाउसमा आफ्ना ठूली दिदीसँग हुर्किए। बच्चाको रूपमा सामान्य जीवन बिताउने पक्षमा रिपोर्ट छ कि पछिल्लो जन्मेको बच्चाको रूपमा, किरनलाई पहिलो प्याम्पर्सन गरियो तर पछि उसका आमा बुबाले पक्रिए।
Kieran Tierney एक बचपन सेल्टिक प्रशंसकको रूपमा हुर्कियो। आफ्नो परिवारको प्रमुख (उसको बुवा) माइकलले सबै परिवारका सदस्यहरू सेल्टिक सीजन टिकट धारकहरू हुन् भनेर सुनिश्चित गरे। शाब्दिक रूपमा, उनका सम्पूर्ण परिवारहरू डाइ-हार्ड सेल्टिक प्रशंसकहरू थिए जुन क्लबको फुटबल तिनीहरूको शिरामा परिरहेको थियो।
सानो छँदा, टियरनी प्रायः हरेक क्रिसमसमा सेल्टिक जर्सीको लागि आफ्नो आमालाई सोध्छन्। उसको शुरुआती वर्षहरूमा अविस्मरणीय समय सेल्टिकले स्कटल्याण्डको प्रिमियर लिग र लिग कपको डबल जितेको थियो, यो त्यस्तो उपलब्धी हो जसले उनको पेशेवर फुटबलर बन्ने निर्णयलाई प्रेरित गर्‍यो।
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
किरन टियरनीका अभिभावकहरूले उनलाई सेन्ट ब्रेन्डनको आर सी प्राइमरीमा सबै भन्दा राम्रो मदरवेल स्कूलहरूमा शिक्षा हासिल गरेका थिए। पछि, टियरनीले मदरवेलमा अवस्थित हाम्रो लेडी हाई स्कूलमा पढ्न थाल्नुभयो। तपाईंलाई थाँहा थियो?... उनले आफ्नो बाल्यकालको शिक्षा दिनहरू रमाइलो गरे किनभने उनकी आमा, गेल टियर्ने आफ्नो स्कूलको लागि एक रात्रिभोज महिला हुन्।
स्कूल प्रश्नोत्तरी जसले उसको ड्राइभलाई पेशेवर बन्न पुर्‍यायो:
स्कूलमा उसको बाल्यकालका दिनहरूको विवरण दिँदै, कीरनले एक पटक भने;
“जब म स्कूलमा थिएँ, हामीलाई हाम्रा बिषयहरू छान्ने र जब हामी ठूलो हुन्छौं तब जागिरको रूपमा गर्न चाहन्छौं भनेर बताइएको थियो। म सँधै फुटबल छान्दछु तर मेरो शिक्षकले मलाई भन्नुहुन्न कि मैले त्यसो गर्नु हुँदैन। यसको सट्टामा मैले 'योजक' वा सम्बन्धित कुनै कुरा लेख्नु पर्छ"।
यदि तपाईं पढ्न थाहा छैन, एक “योजक"त्यस्तो व्यक्ति हो जसको काम भवनको काठका अवयवहरू निर्माण गर्दछ, जस्तै सिढी, ढोका र विन्डो फ्रेमहरू। टियरनीले उसको शिक्षकको सुझावलाई उहाँ एक जोर्नी बन्न अस्वीकार गर्नुभयो। त्यस दिनदेखि, उनले पहिले एक पेशेवर फुटबलर बन्ने सपना मा जिद्दी पालन गरेर आफ्नो शिक्षक गलत प्रमाणित गर्ने वाचा गरे।
स्कूलको प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्नमा उसको रुचि उसले सेन्ट निनिन हाई स्कूलमा भर्ना भएको देख्यो। किर्किन्टिलोचमा अवस्थित यो स्कूलको सेल्टिक फुटबल क्लबसँग युवा फुटबल विकास साझेदारी थियो। कीरन टियरनीको फुटबल प्रति जोशले पछि पिचमा कडा परिश्रम गरे जसले उसलाई मानसिक तवरले कठोर बनाएन तर उनलाई सेलेक्टिक एकेडेमीले मान्यता दियो जसले उनलाई परीक्षणको लागि आमन्त्रित गर्‍यो।
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
कीरन टियरनीको खेलको उत्कटताले उनलाई उडान र colors्गमा परीक्षाहरू पार गर्दै र सेल्टिक एकेडेमीमा 7-वर्षको उमेरमा सामेल भएको देखे। सम्मिलित भएपछि, यो रमाईलो थियो, तर टियरनीले धेरै त्यागहरू गर्नु पर्‍यो। कहिलेकाँही उसले जन्मदिनको पार्टीहरू वा चीजहरू याद गरे जुन उसले आफ्नो परिवारको घरको लागि हेरिरहेको थियो। तर फ्लिप पक्षमा, ऊ फुटबल खेल्दै थियो र उसले के गरेको थियो सधैं माया गर्थ्यो।
कीरन टियरनीले सेल्टिकमा सामेल हुने आफ्नो सपनाको पछि लागिरहेको देखी। क्रेडिट आईजी
कसरी उसको बुबाआमाले उनको प्रारम्भिक क्यारियरमा उसलाई समर्थन गरेको खाता प्रदान गर्दै, किआरनले एक पटक उनको बुवाको बारेमा भने।
“मेरो बुबाले मलाई त्याग गर्नुभयो र मेरो लागि धेरै त्याग गर्नुभयो। उनी सँधै मलाई आइतवार पनि पिचमा साथ आउँथे। मेरो बुवा मभन्दा धेरै उच्च हुनुहुन्थ्यो र म यसको लागि धेरै आभारी छु। "
तपाईंलाई थाँहा थियो?… Kieran Tierney एक बायाँ-विger्गरको रूपमा शुरू भयो र बायाँ पछाडि होइन। त्यतिखेर, उनको सेल्टिक एकेडेमी प्रशिक्षक मार्टिन मिलरले आफू जहिले पनि विger्गर रहिरहने आग्रह गरे। त्यो सेल्टिक मानसिकता भएको उनले क्लबमा हुँदा उनले धेरै प्राथमिकताहरू जग गरिरहेका देखे। त्यस्तै एउटामा बल केट बन्नु पनि समावेश छ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… कीरन टियरनी सेल्टिकको अविस्मरणीय चैम्पियन्स लिगको रातको एक खेलमा थिए। क्लबले नोभेम्बर2मा एफसी बार्सिलोना 1-2012 लाई हराउँदै विश्वलाई चकित पारे। तल उसको बलको बच्चाको कर्तव्यहरूमा धेरै खुसीको फोटो रहेको छ।
Kieran Tierney एक युवा बल बालक र एकेडेमी खेलाडी को रूप मा धेरै उत्साहित देखिए। आईजी लाई क्रेडिट
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
कीरन परिपक्व हुन थालेपछि उनले आफूलाई एकेडेमीसँगै जीवनमा राम्रोसँग बसिरहेको देखे। उनले राष्ट्रिय टोली समावेशीकरणको पक्षमा पनि सफलताको हरेक तहमा स .्घर्ष गरे। यद्यपि आफ्नो क्यारियरको मध्य चरणमा किरनले खेलको लागि स struggle्घर्ष गर्न थाले। उसको शब्दमा;
"एक समय थियो जब मैले खेल पाइन। 14 वा 15 मा, म स्कटल्यान्डको लागि कहिल्यै छनौट भएन र यो त्यस्तो समय हो जब म स्कटल्याण्ड टीममा थिइनँ, र वास्तवमै क्लब फुटबल पनि खेल्दिन। "
निस्सन्देह, त्यस्तो समय धेरै गाह्रो थियो विशेष गरी जब उसले सँगी टीमका साथीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेको र नयाँ करारमा हस्ताक्षर गरेको सुन्छ। सबैभन्दा खराब पनि त्यतिखेर भएको थियो। यो एक समय थियो जब किल्टन टियरनीले उनको खुट्टा भाँचे जब उनी सेल्टिक पहिलो टीम बनाउने छेउमा थिए (केवल 24 घण्टा)। उसको दु: खपूर्ण शब्दहरूमा;
"म सब भन्दा माथिबाट गएँ, म भोलिको सब भन्दा कम ठाउँमा पुग्थें, तर त्यसले मलाई राम्रो खेलाडी र ह hungन्गर बनायो ..." Tierney भने।
उसलाई फिर्ता सेट गर्ने असाधारण दुर्घटना डिसेम्बर 2014 को आसपास भयो। जवान केटालाई जित्न यो एउटा ठूलो अवरोध भयो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो सेल्टिक मानसिकता हो कि उनलाई त्यो चीजसँग डिल गर्न मद्दत गर्दछ जुन एक महत्वाकांक्षी फुटबलरलाई खुट्टा भाँच्ने सबैभन्दा खराब समय भनेर चिनिन्छ। “मेरो खुट्टा भाँचिनु मेरो लागि वास्तविकता जाँच थियो। यो जुनसुकै बेला पनि कसैलाई पनि हुन सक्छ " Kieran भने।
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
घाइते हुँदा पनि, किरनको आत्मविश्वास यत्ति उच्च थियो कि पहिलो-टीम फुटबलको छूटको स्वाद पाउन सकेन। चोटपटकबाट बाहिर आएपछि, उसले हल्कासित लिनको लागि यो बानी सुरु गर्यो।
यद्यपि युवा फुटबल उसको लागि सबै सादा यात्रा थिएन तर जेष्ठ फुटबल जुन मार्च 2016 को आसपास शुरू भयो भुक्तान गरियो। वरिष्ठ फुटबलमा प्रवेश गर्दा उनलाई यस प्रक्रियामा सहयोगी कप्तानको कमाई भन्दा पहिलेभन्दा कडा परिश्रम गर्यो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… आफ्नो क्लबको साथ आफ्नो सफलताको क्याप राख्न, टियरनीले चार स्कटिश प्रीमियरशिप उपाधि जित्यो जुन एक एक्सएनयूएमएक्स-बर्षको उमेरको रूपमा ट्रबल थियो।
Kieran Tierney सेल्टिक महिमा दिनहरु। क्रेडिट दैनिकमेल र स्कट्सम्यान
यूरोपीयन चरणमा टियरनीले पनि धेरै क्रेडिट पायो। त्यस्तै घटनाहरू एक समयमा उनले PSG को 160m मान्छेसँग बकवास गर्न इन्कार गरे किलियन एमपीपी र बायर्न म्युनिक सही कथा Arjen Robben र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, Raheem Sterling.
म्यान्चेस्टर सिटी बिरूद्ध धेरै राम्रो च्याम्पियन प्रदर्शन गर्दै उत्कृष्ट चम्पियन्स लीग गोल 2018 / 2019 सत्रमा सेल्टिकको सबैभन्दा शोषक प्रतियोगिता हो। यसले म्यान सिटी सहित प्रिमियर लिग क्लबहरू आफ्नो हस्ताक्षरको लागि घुँडा टेक्न माग्दछ।
Kieran Tierney म्यान सिटी को बिरूद्ध फेम गर्न को लागी। क्रेडिट GlasgowLive र डेली रेकर्ड
धेरै प्रिमियर लिग प्रशंसकहरूले ईच्छा गरे अनुसार, पूर्ण-ब्याकले अनुसरण गर्ने निर्णय गरे Virgil van Dijk र विक्टर वान्यामामा। उनले 2019 ग्रीष्मकालीन ट्रान्सफर डेडलाइन विन्डोको गर्मीमा आर्सेनलमा सामेल भएर प्रिमियर लिग चालको पक्ष लिए।
उसलाई असाध्यै मन परेको क्लब छोड्नु उसको जीवनको सब भन्दा गाह्रो निर्णय थियो। कुनै श doubt्का बिना, Kieran Tierney एक प्रीमियर लीग मा एक ठूलो सफलता हुनेछ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
उनको प्रसिद्धिमा र प्रिमियर लिगमा सामेल भएपछि धेरै प्रशंसकहरूले ज्वलन्त प्रश्नहरू सोधेका थिएः “Kieran Tierney के प्रेमिका को हो?“…”के Kieran Tierney विवाहित छ? "..." यदि हो भने, Kieran Tierney को श्रीमती को हो "
Kieran Tierney गर्लफ्रेंड को हो
आफ्नो प्यारो जस्तो देखिन्छ भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन, प्यारो मुस्कानको साथ यो कुरा पनि मिल्छ कि धनी छ कि उसलाई उनको महिला प्रशंसकहरु को एक प्रिय बनाउन छैन। जे होस्, सफल स्कटिश फुटबलर पछाडि, त्यहाँ एक ग्लैमरस प्रेमिका छ जो एमी हेलको नामले जान्छ। एमी हेले चित्रण गरीएको आइरिस नर्तक हो जो कि स्कटल्याण्डको सानो शहर किर्किन्टिलोचका हुन्।
Kieran Tierney प्रेमिका- एमी हेल। क्रेडिट साँझको समय
तथ्य यो छ कि Kieran Tierney 22 बर्ष पुरानो छ जब लेखन को समय मा संकेत गर्छ कि उहाँ तीन वर्ष पुरानो उसको प्रेमिका एमी हेल ​​जो 19 छ।
एक WAG को रूप मा, एमी आयरल्याण्ड मा सबै भन्दा राम्रो नर्तकहरु को रूपमा भनिन्छ। लेख्ने समयमा जस्तै, स्कटिश सूर्य भर्खरै उनको डब्लिनमा आयोजित आयरल्यान्ड नृत्य च्याम्पियनसिपको लागि योग्य भएको रिपोर्ट छ।
Kieran Tierney प्रेमिका एमी Hale उनको नाच पोशाक मा। क्रेडिट साँझको समय
एकसाथ नृत्य, रिपोर्टहरू छन् कि एमी हेल ​​एक विश्वविद्यालय विद्यार्थी छ। उनी अध्ययन गर्न स्ट्राथक्लाइड विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन लाग्छिन् “प्राथमिक शिक्षण"लेखेको समयमा जस्तै।
दुबै प्रेमी र प्रेमिका मनपराउँदछन् सुन्दर-अज्ञात गन्तव्यहरूमा। तलको अप्ठ्यारो फोटोबाट हेरेजस्तो देखिन्छ कि जोडीले जोडीलाई स्कटल्याण्डको फुटबलको चल्ती जोडीमध्ये एक हुनबाट रोक्न सक्दैन।
Kieran Tierney र एमी हेल। लाई क्रेडिट स्कटिश सूर्य
यो दुबै प्रेमीहरूले एक समयको लागि डेटि been गर्दै छन् भन्ने तथ्यमा दुवैले विवाह वा दुबैको लागि विवाह अर्को औपचारिक चरण हुनसक्दछ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन।
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
Kieran Tierney नामको पछाडि वास्तविक व्यक्तिलाई चिन्नुले तपाईंलाई उसको पूरा तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवात गरेर, Kieran Tierney को बारे मा कसैले देख्ने पहिलो चीज भनेको त्यो प्रभावकारी डाउन-टू-पृथ्वी र मानसिक रूपले गाह्रो प्रकृति हो। जस्तै Ngolo Kante, उहाँ एक धेरै राम्रो दृष्टिकोण र वास्तविक संसार कसरी काम गर्दछ थाहा छ एक संग फुटबलर बीच छ।
किरन त्यस्तो व्यक्ति हो जसले विश्वास गर्दछ कि ऊ आफू आफैंमा भएको विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम छ। एउटा चीज जुन उनी राम्रा पक्षमा छन् सबै प्रकारका प्रशंसकहरूसँग सम्बन्ध गाँस्न सक्ने उनको क्षमता। एक उदाहरण तल देखाइएको छ।
Kieran Tierney डाउन टू अर्थ प्रकृति - विस्तारित। BTSport मा क्रेडिट
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
Kieran Tierney परिवार को सम्पूर्ण सदस्यहरु वर्तमान मा आफ्नो सपनाहरु बाँचिरहेका छन्। दुबै उसको आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र सम्पूर्ण आफन्तहरूले बेलायतको फुटबलको सबैभन्दा ठूलो चरणमा आफ्नै बनाउने फाइदाहरू अहिले कटौती गरिरहेका छन्।
किरेन आफैले आफ्नो परिवारमा विशेष गरी उनको आमा र बुबामा राम्रो स्प्ल्याश गर्दछन्। तपाईंलाई थाँहा थियो?… जब टियरनीले आफ्नो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, उनले मदरवेलमा आफ्नो आमा र बुबा दुबैको लागि एउटा घर किने।
Kieran Tierney- आफ्ना आमाबाबुलाई उनीहरूको श्रमको फलहरूको आनन्द उठाउन।
प्रिमियर लिगमा जानुभन्दा ठीक पहिले किरनले धेरै पैसा कमाए पनि उसले आफूले किनेको घरमा उसका बाबुआमासँग बस्दाका फाइदाहरू उपभोग गर्दछ। उसको शब्दमा;
“मेरा बाबुआमासँग बस्नु भनेको मलाई केही तरिकाहरूमा आधारभूत बनाउँछ। मेरो आमा र बुबा अझै प्रभारी हुनुहुन्छ। म अझै राम्रो राम्रो वर्ष को लागी बाहिर जाने र एक्लो रहने योजना छैन। "
टियरनीले आफ्ना आमाबुबासँग बस्ने निर्णयमा पाएको एउटा फाइदा भनेको उसको आमा र बहिनी दुबैको हेरचाह गरेको देख्नु हो। फोहोर लुगा धुने र उसको खाडल धुने जुन उनी आफ्नै कोठामा छोड्न मन पराउँछन्। फेरि उसको शब्दहरूमा ...
"मेरा आमा बुबा मेरो लागि सबैकुरा गर्नुहुन्छ र मलाई कहिले पनि दिक्क पार्नुहुन्न। तिनीहरूले पिचमा मलाई मद्दत गर्न यथाशक्य गर्छन्, र म सात वर्षको भएदेखि त्यसो गर्दै आएका छन्।"
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - LifeStyle
Kieran Tierney को 12,50 मिलको खुद सम्पत्ति छ। Writing लेख्ने समयमा जस्तो। यसको अर्थ यो हुन्छ कि उहाँ एक करोडपति फुटबलर हुनुहुन्छ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… यति धेरै लायक भएकोले ग्लैमरस जीवनशैलीमा अनुवाद गर्दछ। Kieran Tierney एक चम्किलो कार BUT तर फेन्सी नाडी घडी, हीरा र स्टड झुम्का को लागी साइन इन छैन।
Kieran Tierney LifeStyle। क्रेडिट कुराकानी
Kieran Tierney आफ्नो पैसा आफ्नो परिवार र आफ्नो नजिकका मान्छेहरु मा खर्च गर्छ जसलाई उनीहरु आफ्नो पारिवारिक बजेट कायम राख्न मद्दत गर्दछन्। उसको बाबुआमा, आफन्त र नजिकका साथीहरू आर्थिक हिसाबले ठीक छन् भन्ने कुरा निश्चित गर्नमा उनको भक्ति पिचमा उनको प्रतिबद्धता जस्तै छ।
Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
आफ्नो पहिलो खेल अघि आर्सेनल रेकर्ड तोड्दै:
तपाईंलाई थाँहा थियो?… कीरन टियरनीले एक पटक आर्सेनलमा एक नयाँ उचाइमा हिर्काए पनि उनले आफ्नो पदार्पण गरेनन्।
Kieran Tierney- क्लब संग आफ्नो पहिलो खेल अघि एक आर्सेनल रेकर्ड ब्रेकिंग। आर्सेनलटीभीलाई क्रेडिट
चोटपटक लागे पनि उनले आर्सेनलको एक मेडिकल स्टाफलाई स्तब्ध पारे। टियरने पहिलो जम्पमा आधा मिटरमा पुगे। त्यसपछि उनलाई आर्सेनलका मेडिकल स्टाफले फेरि प्रयास गर्न भन्यो, जुन समय उनले त्यो रेकर्ड तोडे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… टियरनी अविश्वसनीय 55 सेमी पुगेको थियो जसले उसलाई कुटेको देखे Aubamyang गरेको 1 सेमी द्वारा अघिल्लो रेकर्ड।
अनटोल्ड सम्मान: प्रीमियर लिगमा आउनु भन्दा पहिले, किरन टियरनीसँग संयुक्त संख्यामा 8 क्लब र 16 व्यक्तिगत सम्मानहरू थिए। विकीबाट प्रमाणको एक टुक्रा तल फेला पार्नुहोस्।
Kieran Tierney तथ्य- सम्मान को उहाँको अद्भुत संख्या
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Kieran Tierney बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य पढ्न को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
Krzysztof Piatek बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
आरोन कनौली बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
अर्लि Bra ब्रुट हालान्ड बाल्यकाल कहानी, प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Teemu Pukki बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईन्छ
सी रोनाल्डो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
रोबिन वैन फारसी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
ईडन खतरा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 1